देउवा मन्त्रीमण्डलमा बाँकेले पायो दुई मन्त्री – sunpani.com
देउवा मन्त्रीमण्डलमा बाँकेले पायो दुई मन्त्री
नेपालगञ्ज – शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा बाँकेले दुई मन्त्री पाएको छ ।
नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाल र महेश्वर गहतराज मन्त्री भएका हुन् । हमाल कांग्रेस र गहतराज माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्री भएका छन् ।
झण्डै तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा बाँकेबाट हमाल र गहतराज परेका हुन् । हमाललाई उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति र गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
हमाल गैरसांसद हुन् । उनी कांग्रेस बाँकेका पुराना नेतामा गनिन्छन् । २०२८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेविसंघको अध्यक्ष हुँदा हमाल बाँके अध्यक्ष रहेका थिए । २०५३ सालमा कांग्रेस बाँकेका सभापति बनेका हमाल २०६४ सालको निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि, उनी पराजित हुन पुगे ।
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा हमाल देउवाका विश्वास पात्र थिए । हमालका दाजु भाइराजा कांग्रेसका स्थापित नेता थिए । उनको देउवासँग राम्रो दोस्ती थियो ।
त्यही पारिवारिक सम्बन्धले गर्दा नै नेपालगञ्जमा सुशील कोइरालाको दबदबा हुँदा हमाल देउवातिर लागेका थिए । हमाल सुशील कोइरालाको कोभाजनमा परिरहे । राजनीतिमा लामो त्याग गरेका नेता हमाल कोइराला परिवारले मन नपराउदा पछाडि परिरहेका थिए ।
पछिल्लो समयमा हमाल हिन्दु राज्य बनाउने अभियान सक्रिय रहदै आएका छन् । हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका जेठान पर्छन् । नाता पर्ने भएकाले हमाललाई प्रधानन्यायाधीश शमशेरको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
अर्का मन्त्री गहतराज माओवादीको यस क्षेत्रको चर्चित नेता मानिन्छन् । उनी बाँके क्षेत्र नं. १ का सांसद हुन् । रुकुममा जन्मिएका गहतराज नेपालगञ्जको स्थायी बासिन्दा भइसकेका छन् । माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका क्रममा गहतराज बाँके, बर्दियामै खटिएका थिए । माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा रहदै आएका गहतराजलाई यसपटक पार्टीले न्याय गरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
बाँकेबाट मन्त्री भएका हमाल र गहतराज जनतासँग घुलमिल भएका नेता मानिन्छन् ।